Esikhathini asemncintiswaneni imisebenzi yasekhaya yansuku zonke futhi umsebenzi abesifazane abaningi ukuthola kunzima ukuba nesikhathi bona. Esikhathini rush engapheli abeka ezintweni ezimenza azizwe atjhaphulukile noma lezo wabanjwa iso yabo. Yilokho nje indlela enjalo yokuhlaziya isimo awazange afake isandla ekuthuthukiseni isitayela akusho imodi ukufanisa. Kodwa, kwacaca ukuthi, ukungabi isikhathi zokungazimiseli ukuqonda ikhabethe kwansuku, ungahlala ukukulungisa. Ukuze ukuthi kwanele ukuba adonsele ukunakekela inhlangano efana Fashion Academy kanye nesitayela. Kuyini lokhu inkampani? Ubani-ke sidalwe? ukuqeqesha kanjani? Futhi indlela ngempumelelo ke ukufunda?
Nasi ulwazi mayelana project
Academy of Fashion nesitayela - inhlangano eyingqayizivele ngokukhethekile abameleli ukuqeqeshwa Engxenyeni fair lesintu ukude. Okwamanje, abafundi kulesi sikhungo amayelana 365 000 abesifazane namantombazane babo bonke ubudala abahlala emazweni ahlukahlukene emhlabeni.
Isifinyezo umlando wenhlangano
Le phrojekthi ngaphansi kwesihloko esithi ethembisa Academy of Fashion nesitayela lamiswa ngo-December 2012. Umqondo ukudala inhlangano enjalo ephethwe Anne Arsenevoy nomyeni wakhe Sergey. Ngokusho izindaba Heroine yena, ekuqaleni iphrojekthi uJesu wazalwa iqoqo amathiphu ukukhethwa efanele izingubo, ukwenza-up, kwekhanda, ekwakheni isitayela izibalo, njll Uhlobo Wonke amathiphu senziwe ibhulogi kombhali Anna, lapho, eqinisweni, yena waphendula imibuzo eminingi ezivela kubasebenzisi futhi anikeze iseluleko khulula.
Njengoba nje iphrojekthi buthola umfutho, kusho u-Anna Arsenyev, sakhula futhi nedlanzana. Kamuva, inani abasizi kanye nochwepheshe baweqile kude 10 abantu. Yingaleso sikhathi lapho kwanqunywa ukuba ahlele ezingaphezu kuka Kulindeleke ibhulogi izingqikithi. Ngakho kukhona lokhu esiyingqayizivele kuzo zonke izici Academy.
A amazwi ambalwa mayelana kakhulu umdali kwenhlangano
Anna Arsenyev - hhayi kuphela umbhali kanye uMdali Academy of fashion nesitayela, kodwa futhi unjiniyela izinhlelo ezahlukene phezu 40 izindaba ngendaba isitayela, isakhiwo, ukubekeka kanye ukukhethwa of izici ngamunye wezigqoko. amasu wakhe ethulwa ngesimo izinkulumo, okuyinto wakujabulela uchitha futhi aluka bonke comers.
Ngaphezu kwalokho, u-Anna iminyaka eminingi njengelinye lamazwe Ochwepheshe top-notch ngesitayela siqu. Naphezu kweqiniso lokuthi okusebenza isikhathi esithile ezisezweni fashion ngempela (kusukela ngo-1999), izincomo zawo awalulahlanga udumo zabo zangaphambili. Kunalokho, it is afinyelelwe, it is zenani futhi ehlonishwa. Noma kunjalo, ngemva kwakho konke lokhu blonde usengozini futhi enhle idale ezingaphezu kuka-100 ehlukene imfashini izingubo amaqoqo, Lingerie nezinye izinsimbi. Phakathi nenkonzo yakhe yokuba elikhula ngokushesha, uye mathupha bafundiswe futhi baqeqeshwe phezu 900 Ochwepheshe abasha ngesitayela. With iqhaza layo esebenzayo kanye Academy yasungulwa fashion nesitayela Anny Arsenevoy.
Kuyini ifilosofi phrojekthi?
Ngokusho umbhali yephrojekthi, owesifazane kufanele sibe bahle njalo. Futhi-ke, indima enkulu ukudalwa lesi sithombe udlala isitayela ekhethwe kahle futhi ibe nobuhlakani. Yilokho nje hhayi wonke owesifazane isikhathi sethu uyakwazi ke. Academy of Fashion nesitayela Anny Arsenevoy ukuvumela ukuba alungise lesi simo futhi ukufundisa Wabasaqalayo izinto eziyisisekelo ozinikezele ubuhle kanye nesitayela siqu.
Phakathi izazi ukuqeqeshwa Academy isebenzisa izingxenye ezintathu ezilandelayo:
indlela Siqu (ikhumbula zonke izici ngamunye bunjwa, ukunambitheka izintandokazi, nemvelo nokunye okuningi).
Ukufinyeleleka (ngoba abafundi azikho imingcele esekelwe ubulili, iholo ezingeni, ubudala noma isikhundla emphakathini).
Ngempumelelo (ochwepheshe ukunikeza 100% futhi ahlinzeke imiphumela imisebenzi yabo).
Konke lokhu uthembisa Fashion Academy kanye nesitayela. Uphenyo kule nhlangano ungezwakala ezahlukene kakhulu. Ngesikhathi esifanayo othile uyamncoma, futhi othile, kwakubonakala sadlala imali. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Lokho okuqala kuyingxoxo umsebenzi isitayela?
Ngokusho kochwepheshe we Academy, lapho umsebenzi isitayela iqala ekutadisheni izici zawo siqu futhi eyingqayizivele. Ngakho, umfundi we Academy bajwayelane izinhlobo bobunjwa, izici kanye nesitayela tsvetotipa. Ngesikhathi esifanayo abakuchaza nemingcele futhi baqala ukwakha unendlela yakhe. Kuyaphawuleka ukuthi ukutholakala kolwazi yenzeka izingxenye kanye step by step. Futhi, ngakho-ke, abafundi bafunde inhlangano kusuka ekuqaleni bese ukuhambisa endaweni efanele ngaphansi kokuqondisa stylist siqu futhi uthisha.
Yiziphi izingqinamba nezinkinga ixazululwe by ukuqeqeshwa?
Ngokusho Izibuyekezo eziningi, Academy of Fashion nesitayela uhlola isimo ezivamile lapho abesifazane unenkinga ukwakheka ikhabethe nomfanekiso waso. Kulokhu, ukuqeqeshwa ngokwayo wenziwa kuvidiyo kanye izifundo virtual, ukuqeqeshwa, ngesikhathi enikeza izimpendulo njalo kunazo wabuza imibuzo. Ngokwesibonelo, ngemuva kokuphumelela ukuqeqeshwa "stylish - nje", umfundi ngamunye uzokwazi:
Ngokuzimela khetha izingubo zakho eziyisisekelo.
Ukuze wakhe owakho futhi ukwakha isithombe (okusekelwe ukukhethwa alungise izinwele kanye makeup).
Ingabe kuyazuzisa ukwethula ukubukeka kwabo (umsebenzi nohlobo sibalo, tsvetotip, ebusweni shape, njll).
Indlela uqeqesha esikoleni?
Ezemfundo at the Academy senzeka ukude. Okokuqala, ochwepheshe batusa inhlangano ukudlula okuthiwa ukuqeqeshwa okuyisisekelo. Lokho inikeza Academy of Fashion nesitayela Anny Arsenevoy. izifundo Mahhala kulesi sifundo okuyinto ncamashi emihlanu, akuzona nje isipho kanye isenzo sokuthakazelelwa, bese unika amandla abafundi esizayo sokumazi nenhlangano eziyisisekelo eziyisisekelo isitayela. Ngokusho idatha wokulungiselela, le nkambo kuyokwenzeka njalo ngenyanga mayelana 7 000 abesifazane namantombazane babo bonke ubudala.
Ngo esigabeni sesibili, uma unentshisekelo eemfundweni khulula, basuke Kusolwa ukuba ikhokhwe kakade video tutorials. Futhi wonke umuntu ufuna, njengoba besho abasebenzisi, kuhambisana stylist siqu. Phakathi nenkathi ukuqeqeshwa, unikeza iseluleko esihle, ngokusiza ukusebenza ukwakheka isithombe bebodwa, amasethi yokudala kanye amasheke umsebenzi wesikole.
Futhi ekugcineni, ngemva abathandi iziqu fashion diploma hhayi kuphela, kodwa futhi iphothifoliyo siqu, iqoqo ngabanye onion-izincwadi namathiphu ukudala isithombe sakho futhi ukusebenza kwabo.
Academy of Fashion nesitayela Anny Arsenevoy: Intengo
Ukuqeqeshwa esikoleni kungenziwa ukhokhelwe ngokuvumelana nenani we amaphakheji akhethiwe. Ngokwesibonelo, intengo iqoqo "ejwayelekile", ohlanganisa zonke isiqophi ezintathu sifundo nge iqoqo amathiphu kanye imifanekiso ebonwayo kuyokulahlekisela ruble mayelana 1300.
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe "umuntu" isethi, ezihilela 3 amavidiyo, siqu stylist yokubonisana kanye imiyalelo emibili kusukela uchungechunge oluthi "Indlela ukuthola futhi bathole izinto eziyisisekelo" yesithombe izobiza ruble 2270 ezibizayo. Inani iphakethe «VIP-ukwesekwa" ngokuziqhathanisa isethi yesibili ifike ruble 1900. Kodwa uma ukhetha le iphakethe ulinde usekelo olungeziwe ka stylist siqu nempendulo kusukela ke ingakapheli inyanga emva kokuphela Yiqiniso.
Okushiwo ngabantu mayelana ukuqeqeshwa?
Njengoba siye kakade wathi, imicabango yabantu cwaningo kulezi zingxenye ngokugcwele kule mfundo. Abanye abasebenzisi zithi ngosizo lwabo, bafunda ukwakha isithombe sabo, kuye ngomuntu izici, umbala kanye sibalo hlobo. Zibonisa izithombe zabo ukuqeqeshwa kwalokho. Esinye isigaba akakuthandanga, njengoba zichazwe ngokugcwele amaqiniso aphansi eside kwaziwa. Ngakho-ke, abantu owabathengayo, badumazeka. Eyesithathu kwaba ngokwanele ukuba izifundo khulula Academy, kodwa ukuze uthole amanani for imali abazange alinge.
Running izicathulo "Nike" - lula nenduduzo
Baghdasaryan Elmar - Inkosi isoseji
Kuyini thermostat nendlela ukuhlola?
Njengoba wanxusa yi moonshine ukuthola isiphuzo yizicukuthwane
Whiskey ezihlangene - isiphuzo yizicukuthwane